Nkume Archives - Dafne Kere
Home shop Nkume: Nkume
Home / shop / Ngwaahịa akpadoro "Nkume"
Igosipụta niile 20 pụta
Mbadamba oriọna nke pebbles ji mma - Dimensions: cm. 30 x 10 x 39h - (DFL)
Lampshade lampshade ejiri ya na odide - Dimensions cm. 30 x 25 x 46h - (UL)
Okpokoro oriọna a na-etinye na pebbles na kolii lampshade - (UL)
174€ Aggiungi al carrello
Ejiri pebbles kwadoro ya - Akụkụ: cm. 30 x 27 x 30h - (DFL)
A na-eji akwa akpụkpọ anụ chọọ ya mma - Isi: cm. 30 x 25 x 110h - (DFL)
A na-eji akwa akwụkwọ a na-eme ka ọ bụrụ ihe na-amasị ya - (UL)
Okpokoro na ncha ala - (UL)
Okpokoro nkume na-achọ mma - akụkụ: cm. 30 x 25 x 63h - (DFL)
A na-eji okooko osisi ndị na-acha uhie uhie na cone-lampshade eme ihe - (UL)
Ejiri eriri eji mma - (UL)
Oge chandelier mma na pebbles na cone lampshade - (UL)
Luminaire na-egbuke egbuke - (UL)
Chandelier ise ọkụ lampsshade eji mma ede akwụkwọ - (UL)
312€ Aggiungi al carrello
A na-eji ejiji eriri chandelier - (UL)
328€ Aggiungi al carrello
Oghere oriọna Lampshade na akwụkwọ ozi - (UL)
Okpokoro oriọna nke kpakpando star - (UL)
354€ Aggiungi al carrello
Okpokoro oriọna a na-eji anya ya na pebbles - (DFL)
Mbadamba nke nwere isi na Nkume - (UL)
439€ Aggiungi al carrello
Oriọna oriọna na eriri eriri eriri - (UL)
442€ Aggiungi al carrello
Okpokoro oriọna nke nwere pebbles na cone lampshade mma - (DFL)